Umhla My Pet » 4 Amanyathelo Thumela Egqibeleleyo Umyalezo lokuQala ulibhinqa
ngokuthi sebastian Harris
4 Amanyathelo Thumela Egqibeleleyo Umyalezo lokuQala ulibhinqa
ukubuyekezwa: Sep. 23 2020 | 4 min ukufunda
Ingaba ufuna ukufumana umfazi amaphupha akho ngokusebenzisa ukuthandana online? Kakhulu, bonke kufuneka uyenze kumisa iprofayile kwelinye kumanxuwa ezithandwayo online ukuthandana kwabakhangela lweeprofayile abafazi ababhalisiweyo.
Musa nje jonga imifanekiso yabo. Kusoloko kumnandi ukuba ujonge umfanekiso omhle kodwa ukuba ufuna ukufumanisa ukuba ukuze kwenziwe omnye komnye, kufuneka ufunde iprofayile kwaye ubone ukuba unayo umdla efanayo, ozithandayo kunye neenkolelo.
Wakuba wavela isibini iiprofayili bafumana ubuncinane enye intombazana ukuba unomdla, lixesha ubhale umyalezo wakho kuqala kuye. Oku kudla indawo apho abantu abaninzi benza impazamo ubuncinane enye. Akukho mba xa sisondela intanethi okanye ngaphandle kweintanethi intombazana, ukuqala incoko ngendlela efanelekileyo leyo ebaluleke.
Ungaziva neentloni oko ndiza kukubuza ngoku, kodwa ukuba ngaba niyavuma ukuphucula ubomi bakho ukuthandana, kufuneka uphendule umbuzo ngokunyanisekileyo:
Ngaba wakha ebhaliweyo umyalezo lokuqala intombazana ukuba kusetyenziswa phambi uqhagamshelane enye intombazana? Mhlawumbi umyalezo wakho wakhangela kanje:
Ndaba jonga kwi profile yakho kwaye ndiyacinga ukuba umhle ngokwenene.
Ukuba udla ukubhala imiyalezo njengalo, akunyanzelekanga ukuba uyazibuza ukuba kutheni imizamo yakho ukuthandana online a yi kakhulu nempumelelo. Anisayi Anyanzela umfazi ngokubhala kwakhe lo myalezo efanayo ukuba nabanye abafana abalishumi wathumela kuye phambi.
Ukuze skyrocket ukuthandana impumelelo yakho intanethi kufuneka umisele ngokwakho ngaphandle kwinginginya yabantu osoloko ukusebenzisa imigca efanayo kunye imiyalezo efanayo ezikumgangatho. Wakuba uzibeka ngaphandle, uya kuba akukho lukhuphiswano kwakhona.
1. Eyeyakho Umyalezo
Impazamo kuqala ukuba kakhulu lamadoda kulwenza malunga ukuthandana online kukuba musa nokuba ukutyala ixesha khangela igama lakhe lokwenyani, okanye ubuncinane eyeyakho umyalezo nge nickname yakhe. Abanye abafazi ukuze bazibiza ngokuba "sweet89" kodwa oko akuthethi ukuba akusayi kufumana igama lakhe ngokwenene inkangeleko yakhe ukuthandana.
Ndibone eninzi profiles ukuthandana online neyabafazi babhala phantsi igama wazo kwindawo ethile yabucala, nokuba basebenzisa igama ukuqhatha njengesiqhulo yabo. Ngokubeka kumzamo ukufumanisa igama lakhe lenyani, Unokubonisa ukuba uyifundile inkangeleko yakhe. A eninzi yabafazi musa oku lula kwaye ukuba omnye wabo abambalwa ngoobani abakhathalele ngaphezu komfanekiso, kokuba babethwa ngokupheleleyo.
Ukongeza koko, thina abantu bathanda ukuva igama lethu. Nokuba ukuba umyalezo wakho kuqala nje, uya kuziva uqhagamshelo enamandla ngokweemvakalelo ukuba kwidilesi kuyo igama lakhe. Xa awuyifumani igama lakhe lenyani, kufuneka ubuncinane eyeyakho umyalezo wakho nickname yakhe, endaweni usebenzisa oluthile "hey ".
2. Le Ncoma ngaMnye
Yintoni yokundikhuthaza intle kakhulu onokuyinika kumfazi? Enye ukuba unyanisekile yaye ukuba akeva amaxesha aliwaka phambi. Kusenokwenzeka ukuba umfazi omhle kwinxiwa ukuthandana online ufumana kakhulu lwemiyalezo esuka guys.
Amathuba ziphezulu ukuba bonke mxelele indlela entle kwaye cute yena. Ukuba nje nomnye umntu abhale enye kumgca ngqo ukuba abafana ezilishumi lokugqibela wabhala yakhe, yena mhlawumbi aziphendule. Kuthekani ukuba umxelele ukuba ucinga ukuba mhle, ngenxa yokuba amehlo akhe eluhlaza khangela yanobubele uncumo lwakhe wenza u yancuma kakhulu?
Nantso into guys ezilishumi owabhala phambi akazange athi. Ndishumayela bhinqa enye kunconywa umntu usoloko ngaphezu ndingathethi nto inye ukuba ezinye guys esele wamxelela. Ibonisa zayo kanye kutheni otsaleleke kuye hayi kwamanye amakhulu neyabafazi kuba nemifanekiso intle.
3. Kutheni Yena Special?
Kulungile, Ndiyazi ukuba ufuna ukubhala kuba uthanda kuye, okanye ubuncinane ukuba umfanekiso ubonisa kwiprofayili yakhe, kodwa ke ziyintoni na ezinye izizathu zokuba ufuna ukuba ukwazi kuye? Uncumo Sorry kodwa intle neenwele ezinde eziblond akufuneki kuphela izizathu zokuba ufuna ukwazi umfazi kwinxiwa ukuthandana online.
Uya kuziva abakhethekileyo xa utshintsha ndincoma jikelele ibe nokumncoma lobuqu, kodwa yena uya kuziva bhetele xa ubhala yakhe ezimbalwa ngezizathu yena ngokuzibona ukuba, ukuba nanto yakwenza inkangeleko ngokomzimba.
Ukuba wongeza izizathu esinye okanye ezibini ezibangela ukuba unomdla kuyo, ukuba ezinxulumene ngqo ngobuntu ekonwabisayo ukuba zidweliswe kwiprofayili yakhe, amathuba akho okufumana impendulo entle aya kuba phezulu kakhulu.
Abafazi ufuna ukuziva enomtsalane, kodwa ke sifuna ukufikelela abantu abanomdla ngaphezu imbonakalo yabo yomzimba. Xa emxelela kumyalezo wakho kuqala ukuba unomdla waso nobuntu bakhe, uzibeka ngaphandle zonke oobhuti mxelele ukuba mhle yena, ngaphandle iqaphela yokuba yena wabhala kwiprofayili yakhe kangakanani ukuba uthanda ukuba ekunyamekeleni abanye abantu.
4. Kutheni Ngaba ogqibeleleyo Ngamnye Okunye?
Ngoku phantse yonke into obufanele umyalezo sokuqala. Mnye kuphela ethengisekayo nangoku ayikho. Uyazi ukuba ufuna i sakhe nobuntu bakhe, kodwa yena Uyazi ukuba kutheni ungathanda ubuntu bakhe?
Oku kuyinto Kucacile ukuba kutheni uthanda phambi kwakhe kodwa ukuba Kucacile ukuba kutheni unomdla ngobuntu bakhe. Unakho kunjalo bhala ukuba nimthande yokuba wenza kakuhle ezihla, kodwa njani yena qiniseka ukuba ibhotolo nje uyenze yakhe, ngaphandle nokuba ithetha ukuba.
Into yokugqibela kufuneka uyenze ukuze bagqibezele umyalezo sokuqala kukuxelela ukuba kutheni ufuna zokuzonwabisa zakhe nobuntu bakhe. Wakuba wamxelela ukuba uyasixabisa ukutshiseka kwakhe zeehambo, kuba sele wayehamba lonke Asia kwaye ufuna ukuhamba eMzantsi Melika kunyaka ozayo, uya kuqonda ukuba kutheni ukuba ngogqibeleleyo ukuze omnye komnye.